Kate Foster waxay qancineysaa musharixiinta sababta – Axadle
By axadle	 On Mar 13, 2021
Safiirka cusub ee Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Kate Foster ayaa kulan qadka toos ah kula qaadatay xubnaha Golaha Musharaxiinta Hogaamiyaha iyagoo ka wada hadlay ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidii looga gudbi lahaa maadaama xubnaha Midowga Musharaxiinta ay weydiiyeen sababta ay u wataan warqadaha aqoonsiga. loo dhiibey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday.
“Waxaan kulan miro dhal ah la yeelanay Golaha Murashaxiinta Hogaamiyaha goor hore. Waa muhiim in dhammaan codadka la maqlo. UK waxay ku boorinaysaa dhammaan dhinacyada inay sii wadaan wadahadalka oo ay raadiyaan waddo lagu gaaro doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo loo wada dhan yahay.” Foster ayaa ku tiri hadal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir C / raxmaan C / shakuur Warsame oo ka qeyb galay dood xalay ka dhacday guriga naadiga ayaa sheegay in ay weydiiyeen safiirka cusub sababta ay waraaqaheeda aqoonsiga ugu wareejisay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday laakin ay ka jawaab celisay. .
Warsame oo si toos ah wax loo weydiyay ayaa sheegtay in Kate Foster ay ka dhaadhacday in aysan ka shaqeyn karin dalka iyada oo aan waraaqaheeda waraaqaha ah lagu wareejin madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday isla markaana ay qaadatay go’aanka ah in waraaqaheeda lagu wareejiyo.
Wuxuu yiri iyadoo la qadarinayo doorka Beesha Caalamka ee isu keenista dhinacyada siyaasada Soomaaliya, waxay ku qanacsan yihiin raaligelinta Safiirka cusub ee Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya.
Foster wuxuu waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay Hogaamiye Farmaajo Arbacadii. Maalintii Khamiista, waxay la kulantay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madoobe si ay u maqasho mowqifkiisa ku aadan carqaladeynta doorashada.
Foster wuxuu waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay Hogaamiye Farmaajo Arbacadii. Maalintii Khamiista, waxay qabanqaabisay kulan ay la yeelato madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madoobe Isniinta magaalada Muqdisho si loo dhageysto mowqifkiisa ku aadan carqaladeynta doorashada. Waxay bedeshay Ben Fender, oo safiir ahaa tan iyo bishii Febraayo 2019. Kate Foster ayaa bedeshay Ben Fender, oo safiir ahayd tan iyo Febraayo 2019.
Mikel Arteta ayaa qirtay Thomas Partey
“delays” and “irregularities” in the process